Akụkọ - Mmetụta nke nje covid-19 na NBR latex
NBR latex na-egosipụta ihe ndị magburu onwe ha dị ka iguzogide mmanụ na ọgwụ ndị ọzọ nke na-eme ka ha bụrụ ihe a na-achọsi ike n'ichebe ihe nchebe karịsịa gloves maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ahụike. A na-atụ anya ịbanye na-eto eto a iji mepụta ohere zuru oke na ahịa latexene roba latex n'oge amụma niile.
Penetbanye n'ime ụlọ ọrụ na mpaghara ndị na-emepe emepe yana mmata na-eto eto na nchekwa nchekwa ga-enyere aka na uto nke ahịa n'oge oge nyocha. Ọzọkwa, mmụba ojiji nke gloves na kemịkal, akwụkwọ, na ụlọ ọrụ nri ga-eme ka nitrile butadiene roba latex ahịa kesaa n'oge amụma.
Nje COVID-19 zuru ebe niile na mba ụwa emeela ka ịrị elu nke mmefu ahụike nke ga, na nke ya, mee ka ọchịchọ maka NBR latex gloves n'oge oge amụma. COVID-19 emeela ka ojiji nke gloves maka nchebe onwe onye na-atụ anya na ọ ga-eweta ịrị elu na ahịa ahịa nitrile butadiene roba na afọ 2020.
A na-atụ anya na NBR chọrọ oge maka ụlọ ọrụ na ndị na-ahụ maka ihe oriri ga-adị ala n'oge mkpọchi n'oge 2020, agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụike na-atụ anya igosipụta nnukwu oge dị mkpa n'otu oge ahụ.
Ebu amụma Asia Pacific ga-eto na CAGR kachasị elu n'oge oge amụma. Ọganihu nke ikike site n'aka ndị isi na-emepụta yana yana ịbawanye ego ịgwọ ahụike nwere ike ịchụpụ ahịa azụmaahịa nitrile butadiene roba n'oge oge enyere 2020-2026. Malaysia, Thailand, na China na-enye aka na mmụba ahịa. A na-atụ anya Middle East & Latin America igosi uto na-adịghị ike na oge amụma niile. Ọnụ ọgụgụ ole na ole nke ndị na-emepụta NBR latex na mpaghara ahụ na nnukwu ntụkwasị obi na mbubata na-akpata uto ngwa ngwa. Middle East NBR azụmahịa azụmaahịa ga-eto na CAGR nke ntakịrị ihe karịrị 3% n'oge oge nyocha. (Says si Global Market Insights Inc.)